नेप्सेको नयाँ सिइओ नियुक्त, साउद बर्खास्त - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
नेप्सेको नयाँ सिइओ नियुक्त, साउद बर्खास्त
काठमाडौं । सरकारले अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव रमेश अर्याललाई नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको छ । सरकारले नियुक्त गरे लगत्तै उनले सोमबार नै पदभार ग्रहण गरेका छन् । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अर्थ मन्त्रालयले उपसचिव अर्याललाई सीईओको जिम्मेवारी दिएको जनाएको छ ।
पदभार ग्रहण गर्दै अर्यालले पूँजी बजार विकासका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् । यसअघि सरकारले चन्द्रसिंह साउदलाई असार २२ गतेबाटै लागू हुने गरी सीईओ पदबाट बर्खास्त गरेको पत्र थमाइ सकेको छ ।
अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयन गर्न लागिएको अवःथामा नेप्सेमा प्रमुख कार्यकारी परिवर्तन भएको हो । प्रमुख कार्यकारी परिवर्तनसँगै अनलाइन प्रणालीको भविष्यबारे प्रश्न उठेको छ । नेप्सेले हालै मात्र अनलाइन प्रणालीको युजर एसेप्टेन्स टेष्ट (यूएटी) गर्न कम्पनी छनोट गरिसकेको छ । छनोट भएको कम्पनीसँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर चाहिँ भइसकेको छैन ।
विदेश पुगेर फर्किएका युवा भन्छन्, त्यहाँको लाखभन्दा यहाँको सय जाति’
असार ४ । प्यूठान, विदेशमा लामो समयसम्म बसेर दुःख पाएका युवाले अहिले गाउँमै बसेर नमुनायोग्य काम गर्न सुरु […]
शीतल निवासमा शीर्ष नेताहरूको गोप्य वार्ता !
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र शीर्ष नेताहरुबीचको छलफल सकिएको छ । प्रदेश र प्रतिनिधि सभा […]
राजदूतले गलत सूचना दिएः प्रधानमन्त्री
असोज ७ । काठमाडौँ, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माणदेखि तराईरमधेसमा जारी […]
इपिएलको उपाधि भिडन्त आज,पारस भर्सेस शरद कसले मार्ला बाजी ?
काठमाडौं । एभरेष्ट प्रिमियर लिग क्रिकेटको उपाधिका भिडन्त आज हुँदैछ । कीर्तिपुरस्थित टीयू क्रिकेट मैदानमा […]
डेम्बेले बार्सिलोनामा आउने निर्णयबारे यसो भन्छन्
भदौ १९ । यसै सिजन १०५ मिलियन युरोमा बार्सिलोनाले बोरुसिया डर्टमण्डका स्टार खेलाडी ओउसमाने डेम्बेलेलाई […]
जेठ ३२ । काठमाडौँ, गोरखा केन्द्रबिन्दु भएर आज बिहान पुनः गोरखा भूकम्पको परकम्प गएको छ । बिहान ५ बजेर १२ […]